ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေနည်း (၆) နည်း - For her Myanmar
ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့ ပျော်ရွှင်အောင်နေနည်း (၆) နည်း
News>Women News, Relationships>Letters From the Heart>Motivation, Tips
ယောင်းရေ…ဘဝမှာ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်တာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ အမြဲပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာလည်း ပြောရတာတော့ လွယ်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ထင်တာထက် ခက်ခဲပါတယ်။ တော်ကြာနေအလုပ်ကိစ္စ တော်ကြာနေ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနဲ့ တစ်နေ့တစ်နေ့ စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ဆိုတာ ခဏပါပဲ။ စမတ်ကျတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကတော့ စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် ဒီနည်းလမ်းတွေကို ကျင့်သုံးကြပါတယ်။
နာကျင်ခဲ့တာတွေကို တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဒဏ်ရာတွေ ပေးနေတုန်းလား? စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလို လုပ်နေတာတွေ ရပ်လိုက်ပါတော့။ ဥပမာအားဖြင့် တို့တွေဟာ ကိုယ်တွယ်တာရတဲ့ လူတစ်ယောက် အနားကနေ ထွက်သွားပြီဆိုရင် တချို့က ဖြစ်သမျှကို ကျေကျေနပ်နပ်လက်ခံပြီး လက်လွှတ်တတ်ပေမဲ့ တချို့ကကျတော့ မရမကဆွဲထားတတ်ပါတယ်။
ဒုတိယနည်းလမ်းက ဘယ်တော့မှ အသုံးမဝင်ပါဘူးနော်။ ကိုယ်တိုင်လည်း လူတစ်ယောက်ကို ထွက်မသွားဖို့တောင်းပန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဆုံးမှာ သူလည်း ပင်ပန်းရတယ် ကိုယ်လည်း နာကျင်ရတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ကား ထွက်သွားချင်တဲ့သူများရှိရင် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးမတွေးဘဲ လက်လွှတ်လိုက်ပါနော်။
Related article >>> ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးကို ချစ်မိတဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့ အချက်(၆)ချက်
အတိတ်ကအကြောင်းတွေ တွေးပြီးဝမ်းနည်းနေတာမျိုးကို ရှောင်ပါ။ အနာဂတ်ကို ကြိုတွေးပြီး ပူပန်နေတာမျိုးလည်းမလုပ်ပါနဲ့။ ယောင်းပိုင်ဆိုင်တာ လက်ရှိပစ္စုပန်တစ်ခုတည်းပါ။ လက်ရှိကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေပါ။ ဖြစ်သမျှအကြောင်းကို လက်ခံတတ်လာလေလေ ဆုတောင်းတွေ မျှော်လင့်ထားတာတွေမပါတဲ့ ဘဝက ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းလဲဆိုတာ မြင်လာလေလေပါ။ ဥပမာ အလုပ်ဖြုတ်ခံရတာဖြစ်ဖြစ်၊ ရည်းစားနဲ့ပြတ်တာဖြစ်ဖြစ် ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆိုတာစဉ်းစားမယ့်အစား အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို တွေးပါ။
အလုပ်တွေတော့ နင်းကန်လုပ်တယ်…ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ မသဒ္ဓါဘူးဆိုတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ် အချိန်ပေးပါ။ ကိုယ်ရှာတာ ကိုယ်သုံးလိုက်ပါ။ အလွန်အကျွံသုံးခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာ ဝယ်စားပါ။ Spa သွားပြီး အနှိပ်ခံပါ။ Skincare ကောင်းကောင်းသုံးပါ။ ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် ဝယ်ရတာကို မနှမြောပါနဲ့နော်။
Related article >>> အောင်မြင်သူ အမျိုးသမီး(၄)ဦးရဲ့ ၂၀၁၉ ပန်းတိုင်များ
(၄) ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ပါ။
ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ဖို့ကလည်း အဓိကသော့ချက်ပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေက များသောအားဖြင့် မှီခိုအားထားစရာ လူရှာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ့်အစား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ အားကိုးလိုက်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို သူများလက်ထဲ ဘယ်တော့မှ မထည့်လိုက်ပါနဲ့။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို ယုံကြည်ပါ။ ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်ချစ်ပါ။
(၅) မလိုအပ်တာတွေကို ခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့။
ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့လူတွေ ရှိနေလား? အလုပ်မှာ အဆင်မပြေဘူးလား ? ဘဝအတွက် မလိုအပ်ရင် ဥပက္ခာပြုလိုက်ပါ။ မလိုအပ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ခေါင်းထဲထည့်ထားနေသ၍တော့ ဘယ်တော့မှ အပြည့်အဝ ပျော်ရွှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ယောင်းက ဂရုမစိုက်ရင် မကောင်းပြောတဲ့သူတွေလည်း အလိုလိုပါးစပ်ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
သူက ငါ့ထက် ပိုတော်တယ်၊ ပိုလှတယ်၊ ပိုတတ်တယ်ဆိုပြီး နှိုင်းယှဉ်တာတွေကို ရှောင်ပါ။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အလှဆိုတာရှိပြီးသားပါ။ ယောင်းသိထားဖို့က ဘယ်သူကမှ ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး အားငယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ဝေးကွာနေဦးမှာပါ။ ကိုယ့်မှာ မရှိတဲ့အချက်တွေကို သူများနဲ့ယှဉ်ပြီး စိတ်ပျက်နေမယ့်အစား ရှိပြီးသား အရည်အချင်းတွေကို ထက်သထက်ထက်အောင် အမြဲသွေးနေပါ။
Related article >>> မိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ အလျှော့ပေးရမယ်တဲ့လား
အောင်မြင်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ စမတ်ကျကျအမျိုးသမီးတွေဟာ အလုပ်လုပ်ရင်း တစ်ဖက်မှာလည်း ပျော်ရွှင်အောင်နေတတ်ကြပါတယ် ယောင်းတို့ရေ…ယောင်းတို့လည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ချစ်တတ်ပြီး စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေနော်။
ဘဝမှာ ကိုယျ့ပြျောရှငျမှုကို ဖနျတီးပေးနိုငျတာ ကိုယျကိုယျတိုငျပါပဲ။ အမွဲပြျောရှငျဖို့ဆိုတာလညျး ပွောရတာတော့ လှယျပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ ထငျတာထကျ ခကျခဲပါတယျ။ တျောကွာနအေလုပျကိစ်စ တျောကွာနေ ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စနဲ့ တဈနတေ့ဈနေ့ စိတျခမျြးခမျြးသာသာနရေတယျဆိုတာ ခဏပါပဲ။ စမတျကတြဲ့ အမြိုးသမီးတှကေတော့ စိတျခမျြးသာပြျောရှငျဖို့အတှကျ ဒီနညျးလမျးတှကေို ကငျြ့သုံးကွပါတယျ။
နာကငျြခဲ့တာတှကေို တစိမျ့စိမျ့တှေးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ဒဏျရာတှေ ပေးနတေုနျးလား? စဈမှနျတဲ့ပြျောရှငျမှုကို လိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီလို လုပျနတောတှေ ရပျလိုကျပါတော့။ ဥပမာအားဖွငျ့ တို့တှဟော ကိုယျတှယျတာရတဲ့ လူတဈယောကျ အနားကနေ ထှကျသှားပွီဆိုရငျ တခြို့က ဖွဈသမြှကို ကကြေနြေပျနပျလကျခံပွီး လကျလှတျတတျပမေဲ့ တခြို့ကကတြော့ မရမကဆှဲထားတတျပါတယျ။ ဒုတိယနညျးလမျးက ဘယျတော့မှ အသုံးမဝငျပါဘူးနျော။ ကိုယျတိုငျလညျး လူတဈယောကျကို ထှကျမသှားဖို့တောငျးပနျခဲ့ဖူးပါတယျ။ အဆုံးမှာ သူလညျး ပငျပနျးရတယျ ကိုယျလညျး နာကငျြရတာပဲ အဖတျတငျပါတယျ။ ဆိုတော့ကား ထှကျသှားခငျြတဲ့သူမြားရှိရငျ ရှညျရှညျဝေးဝေးမတှေးဘဲ လကျလှတျလိုကျပါနျော။
Related article >>> ထကျမွကျတဲ့ မိနျးကလေးကို ခဈြမိတဲ့အခါ သိထားသငျ့တဲ့ အခကျြ(၆)ခကျြ
အတိတျကအကွောငျးတှေ တှေးပွီးဝမျးနညျးနတောမြိုးကို ရှောငျပါ။ အနာဂတျကို ကွိုတှေးပွီး ပူပနျနတောမြိုးလညျးမလုပျပါနဲ့။ ယောငျးပိုငျဆိုငျတာ လကျရှိပစ်စုပနျတဈခုတညျးပါ။ လကျရှိကို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျနပေါ။ ဖွဈသမြှအကွောငျးကို လကျခံတတျလာလလေေ ဆုတောငျးတှေ မြှျောလငျ့ထားတာတှမေပါတဲ့ ဘဝက ဘယျလောကျရိုးရှငျးလဲဆိုတာ မွငျလာလလေပေါ။ ဥပမာ အလုပျဖွုတျခံရတာဖွဈဖွဈ၊ ရညျးစားနဲ့ပွတျတာဖွဈဖွဈ ပွဿနာဖွဈလာတဲ့အခါ ဘာကွောငျ့ဆိုတာစဉျးစားမယျ့အစား အခုဘာလုပျမလဲဆိုတာကို တှေးပါ။
အလုပျတှတေော့ နငျးကနျလုပျတယျ… ကိုယျ့ကိုယျကိုယျတော့ မသဒ်ဓါဘူးဆိုတာမြိုး မဖွဈပါစနေဲ့။ ကိုယျ့အတှကျ ကိုယျ အခြိနျပေးပါ။ ကိုယျရှာတာ ကိုယျသုံးလိုကျပါ။ အလှနျအကြှံသုံးခိုငျးတာမဟုတျဘူးနျော။ စားသောကျဆိုငျကောငျးကောငျးမှာ ဝယျစားပါ။ Spa သှားပွီး အနှိပျခံပါ။ Skincare ကောငျးကောငျးသုံးပါ။ ကိုယျ့အတှကျကိုယျ ဝယျရတာကို မနှမွောပါနဲ့နျော။
Related article >>> အောငျမွငျသူ အမြိုးသမီး(၄)ဦးရဲ့ ၂၀၁၉ ပနျးတိုငျမြား
(၄) ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျပါ။
ပြျောရှငျခငျြတယျဆို ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျဖို့ကလညျး အဓိကသော့ခကျြပါပဲ။ အမြိုးသမီးတှကေ မြားသောအားဖွငျ့ မှီခိုအားထားစရာ လူရှာတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုလုပျမယျ့အစား ကိုယျ့ကိုယျကိုယျသာ အားကိုးလိုကျတာက အကောငျးဆုံးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ပြျောရှငျမှုကို သူမြားလကျထဲ ဘယျတော့မှ မထညျ့လိုကျပါနဲ့။ ကိုယျလုပျနိုငျတယျဆိုတာကို ယုံကွညျပါ။ ကိုယျ့ဖွဈတညျမှုကို ကိုယျခဈြပါ။
(၅) မလိုအပျတာတှကေို ခေါငျးထဲမထညျ့ပါနဲ့။
ကိုယျ့အကွောငျး မကောငျးပွောတဲ့လူတှေ ရှိနလေား? အလုပျမှာ အဆငျမပွဘေူးလား ? ဘဝအတှကျ မလိုအပျရငျ ဥပက်ခာပွုလိုကျပါ။ မလိုအပျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ခေါငျးထဲထညျ့ထားနသေ၍တော့ ဘယျတော့မှ အပွညျ့အဝ ပြျောရှငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ ယောငျးက ဂရုမစိုကျရငျ မကောငျးပွောတဲ့သူတှလေညျး အလိုလိုပါးစပျပိတျသှားပါလိမျ့မယျ။
သူက ငါ့ထကျ ပိုတျောတယျ၊ ပိုလှတယျ၊ ပိုတတျတယျဆိုပွီး နှိုငျးယှဉျတာတှကေို ရှောငျပါ။ လူတိုငျးလူတိုငျးမှာ ကိုယျပိုငျအရညျအခငျြးနဲ့ ကိုယျပိုငျအလှဆိုတာရှိပွီးသားပါ။ ယောငျးသိထားဖို့က ဘယျသူကမှ ခွောကျပဈကငျးသဲလဲစငျ မဟုတျဘူးဆိုတာပါပဲ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သူမြားနဲ့နှိုငျးယှဉျပွီး အားငယျနမေယျဆိုရငျတော့ ပြျောရှငျမှုနဲ့ ဝေးကှာနဦေးမှာပါ။ ကိုယျ့မှာ မရှိတဲ့အခကျြတှကေို သူမြားနဲ့ယှဉျပွီး စိတျပကျြနမေယျ့အစား ရှိပွီးသား အရညျအခငျြးတှကေို ထကျသထကျထကျအောငျ အမွဲသှေးနပေါ။
Related article >>> မိနျးကလေးဖွဈနလေို့ အလြှော့ပေးရမယျတဲ့လား
အောငျမွငျပွီး ထကျမွကျတဲ့ စမတျကကြအြမြိုးသမီးတှဟော အလုပျလုပျရငျး တဈဖကျမှာလညျး ပြျောရှငျအောငျနတေတျကွပါတယျ ယောငျးတို့ရေ…ယောငျးတို့လညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ခဈြတတျပွီး စိတျခမျြးသာပြျောရှငျနိုငျကွပါစနေျော။
Tags: Knowledge, life tips, lifestyle, living, smart women, tips, women
Stella February 26, 2019